Zithini iBentley kunye neTrimble ukuya kuzo? -Izixhobo zeGeofumadas
NgoNovemba, 2012 GPS / Izixhobo, Microstation-Bentley
Oku kujongeka njengokuqikelela kwam. Ngomhla we-Aprili Fools, kodwa ayinjalo. Iiyure ezimbalwa ezidlulileyo, isivumelwano sobambiswano sabhengezwa ngokusesikweni, sazeva into emva kwezikhuselo, kwaye isishiya sicinga malunga nokuba kwenzeka ntoni phakathi kweenkampani ezimbini zeePortos Systems kunye neeDimensions zeTrimble.
Siyazi ukuba ukudibana phakathi kwetekhnoloji yokufaka idatha kunye nolawulo lwengcaciso ye-geospatial ngumkhwa ongenakuphinda uguqulwe. Sele siyibonile loo nto ukuba kwelinye icala, apho i-Intergraph, i-Erdas kunye neLeica zidityanisiwe kwisiporho saseYurophu esimele i-Exagon, kugxilwe ngokukhethekileyo kwiimvakalelo ezikude kunye neeNkqubo zoLwazi lweJografi.
Ngoku sibona into efanayo kwisiporho saseMelika, iTrumple eyayisitya bonke abavelisi bezixhobo, phakathi kwabokugqibela oko kwakusele ku-Ashtech, IMagellan, Spectra kwaye ngoku indlela eyomeleleyo nePortugal -wazalwa ngubani wakhula-Umnyhadala osisithunzi kodwa okwazile ukuzibeka kwinqanaba le-Geo -unjineli.
Akukho nto ithi bayadibanisa, kodwa akukho mntu uphikayo ukuba zininzi izinto ezinje ngesiqalo. Ngenxa yengqumbo kaTrimble kunye nokudibana kukaPorton, sinokubona kwiminyaka embalwa imodeli enomdla yolawulo lwedatha yendawo, enxulunyaniswe nokudityaniswa komjikelo oboniswe yiProjekthi yeWisile kunye neAsset Wise, kwiqonga lelo, nangona kungenjalo I-AutoDesk inomgangatho ophezulu kwimarike, ewe kukwinqanaba leenkampani zobuchule kwicandelo lobunjineli bobuhlali nakwezityalo. Kwaye nangona iinkampani zizimeleyo, ukusondela kuthi kuyasinceda sonke, ukuzisa ulwakhiwo kunye neendawo zalo (i-topography, ulondolozo, indalo) kufutshane kuyilo kunye nolwazo.
U-Steve Berglund, u-CEO we-Trimble uthethe into engathethekiyo kodwa kunjalo ukuba sifunda kwaye sikrokrela phakathi kwemigca.
Injongo yeTrimble kukubonelela abathengi bethu ngezisombululo ezihlanganisiweyo, ezikumgangatho wehlabathi ezibavumela ukuba baqokelele, balawule kwaye bahlaziye ulwazi oluntsonkothileyo ngokukhawuleza nangokulula. Ukusebenzisana kwethu ne-900 kuthetha ukuba iinjineli kunye neekontraktha banolwazi olukhulu lweengxaki zokwakha kunye nezisombululo eziphuculweyo ngokweendawo zokuma. Iya komeleza kwakhona ukusetyenziswa kwemodeli apho ulwazi kwicandelo kunye nakwikhabhathi lungasabonwa njengolodwa.
Okwangoku, uGreg Bentley uthe:
Ukusebenza kunye neTrimble, obuchwephesha bobuchwephesha obusetyenziswa yimibutho emininzi yamaqabane ethu, busikhokelela kuphela ekunikezeleni izibonelelo ezikhulu kwiinkqubo ezakhayo esingakhange sizinike zona ngokuzimeleyo. Ngokukodwa, i geolocation Kwizicelo ze-Bentley ziye zaba yinto eqhelekileyo ukuba kungekudala okanye kungekudala iya kusikhokelela ekusondeleni kwindawo yokusebenza yangempela: intsimi.
Ukongeza kuludwe lweziganeko ezandulelayo zokudityaniswa kwe-Intergraph kunye ne-Erdas kunye neLeica, kukho amanqaku amathathu esingafane siwalahle, kwaye aphawula indawo yokuqala ye-900:
1. Ukuphuma kwephothifoliyo yomsebenzi we-Asset Wise, enika ulwazi inqanaba lesine malunga nexesha nokubekwa kweliso kwimisebenzi yolwakhiwo kunye nezinto zentsimi (BIM) ekuphupha ngayo I-imodeli. Ngaphandle kokuba inomdla, akukho lula kangako ukuba ungathengisa kubasebenzisi abaqhelekileyo (njengoko iRevit ibonakala ngathi iyayiphumeza) kodwa iphantsi komdibaniso onje ngalendlela apho i-XNUMX isondela ebaleni kwaye iTrimble inombono wokubuka indawo.
2 Umsebenzi we-Pointools, okhokelele ekufunyanweni kwetekhnoloji yokuhambelana kunye nalo naliphi na iqonga (kubandakanya uVuselelo) lokuthathwa kwedatha kwaye okwangoku i-900 ibonelela ngeDescartes, kodwa enokubakho ngaphaya kwecandelo lobuNjineli kunye izinzwa ezikude
3. Unokwenzeka, olungenakugwetywa, lokucinga malunga nokuba ngubani oza kuqhubeka nomsebenzi wobomi bonke obhuti abathathu, onokuthi ngenye imini athabathe umhlala phantsi ukuze aphumle ... aphilele kwimigudu yawo, uqinisekile ukuba indleko ezininzi zihlala ezandleni ezilungileyo kwaye usinde kwiintengiso zentengiso yesitokhwe. Oku kubonakala kuyinto engaqhelekanga kuthi, kuba kwakudala iTrimble yathenga iTekkla ngezigidi ezingama-500 zeedola, umntu okhuphisana nobuchwephesha obucacileyo bokusebenza ngokusondeleyo ne-Bentley.
Ke, i Uphefumulelwe Ngokuqinisekileyo baya kukhathazwa ziindaba ezothenjiswa ngu-Bentley kulo nyaka: Ukulahlwa kokuphathwa kwelifu elingaphezulu kunye nokusebenza kude, ukuphuculwa kwezicelo ze-iPad kwaye ngoku i-Android, imodeli ye-I iphuculwe kwizicelo ezisebenzayo kunye neeprojekthi zobunjiniyela ngakumbi. yeziseko ezingqondo. Ukutshaya, njengokuba kunjalo nakubahlobo bakho.
Kule iinkampani eziza kwaye zihambeKufana nomdlalo wakudala wesaladi yeziqhamo kunye nezitulo ezilahlekileyo. Xa kuziwa kwimali kunye nokuzinza, nabani na ophula ikratshi labo, ke iindaba zisizisela ulindelo oluqinisekileyo, kodwa sikwashiya namathemba angabikho ndawo yokuphela:
Ngubani oshiyekileyo yedwa?
EMpuma, iSuperGeo, i-ESri yase-Asiya, ngoncedo lukaZatocaConnect ithathe inguqulelo yayo yokuqala yeSpanish, iTopcon + Sokkia (enesikhundla esiseMelika) kunye namakhulu amakhulu amaTshayina angavakaliyo kulo mxholo okwangoku zinakekele Ewe, ndiyilibele iMapinfo efihlwe kumawaka ezinto uPitney Bowes azenzayo.
ENtshona, i-AutoDesk yomyalelo wentengiso ye-CAD, ikufutshane kakhulu yoyilo lwesoftware (Adobe) kunye nezixhobo (Hewlet Packard nezinye). Ukusondela ngaphambi kokuba i-AutoDesk ibe nesicwangciso sobuchule. Kwaye i-ESRI enendawo enomdla kwi-GIS, kumazwe amaninzi akufuphi kakhulu neTrimble-GeoEye.
Onke anezikhundla ezibalulekileyo kwiinkalo zawo, nangona enembono yoko kudityaniswa ngaphambili, ingakumbi xa kuziwa kuzinzo lweengxaki zeentengiso zesitokhwe njengomngcipheko womboniso wesaqhwithi.
Yintoni enye onokuyilindela kwi-Trimble - Bentley?
Andiqinisekanga ngokuqinisekileyo, kodwa ngeveki ndiza kwazi ngokuchanekileyo.
Yintoni esiqiniseke ngayo, kukuba abasebenzisi bazo zombini iitekhnoloji ziya kuba ngabaphumeleleyo. Kwaye ukuba isivumelwano sisiphumo, apho sibona izinto zenkampani zombini zihamba ngokufanayo, ngaphandle kokujonga kakubi okanye ngeenjongo zokuthenga, siya kujongana nomdla -kunye nenoveli-modeli yokulinganisa izibonelelo zokusebenzisana kunye nabasebenzisi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uphefumulelwe i-2012
Post Next Land Lines ikulungele in OctoberOkulandelayo »